Atụmatụ 9 maka imepụta ihe ngosi PowerPoint dị irè | Martech Zone
M na-akwadebe maka ngosi m na-eme ihe dị ka izu 7 site ugbu a. Ezie na ndị ọzọ na-ekwu okwu m maara ga-ekpeghachi otu stale ngosi ugboro ugboro, m okwu mgbe niile ka ime ka ukwuu mgbe m kwadebe, hazie, omume na zuru okè ha ogologo oge tupu ihe omume ahụ.
Ebumnuche m abughi ịkọwa ihe dị na ihuenyo ahụ, ọ bụ ịdebe ihe ngosi dị egwu na-arụ ọrụ na okwu ahụ. Nke a na - eme ka cognition na ebe nchekwa dị elu. Ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị mmadụ ga-achọ ịhụ dọkịta eze karịa ịnọdụ ala na ebe a na-ekwu ha, ebum n’uche m ito ọchị dịkwa!
Dị ka a ọhụrụ Prezi nyocha, 70% nke were n'ọrụ ndị America na-enye n'ihu na-ekwu okwu nkà dị oké egwu ka ihe ịga nke ọma ha na-arụ ọrụ
Clémence Lepers na-enyere ụlọ ọrụ aka iwu ọdọ, ịgba ịnyịnya ibu nke na-eme ka ndị ahịa kwenye ma mechie ha. O tinyekọtara ihe omuma nke a 9 Atụmatụ maka Ngosipụta Dị Irè:
Mara Ndị Na-ege Gị Ntị - Kedu ndị ha bụ? Gịnị mere ha ji nọrọ ebe ahụ? Gịnị mere ha ji echebara ha echiche? Kedu ihe ha chọrọ na ihe ha chọrọ?
Kọwaa Ihe Mgbaru Ọsọ Gị - Gbaa mbọ hụ na ha bụ SMART = akọwapụtara nke ọma, nke a pụrụ ịlele anya, nke a pụrụ iru, nke ezi uche dị na ya na oge.
Mepụta Ozi Na-ekwenye ekwenye - Mee ka ọ dị mfe, ihe doro anya, nke bara uru, ma baa uru.
Mepụta Ndepụta - Bido n'okwu mmeghe banyere ihe kpatara ndị mmadụ ji echebara echiche, kọwaa uru ya, kwado eziokwu gị na eziokwu, debe otu obere ozi kwa slide, ma mechaa kpọọ oku ka ọ rụọ ọrụ.
Dozie Ihe Omume - Jiri font size, shapes, iche na agba ka echiche.
Wulite Okwu - Họrọ akara na mpempe akwụkwọ na-anọchite anya gị, ụlọ ọrụ gị, na nguzo gị. Anyị na-anwa iji gosipụta ihe ngosi anyị dị ka saịtị anyị ka enwere mmata.
Jiri Ihe Anya - 40% nke ndị mmadụ ga-azaghachi nke ọma na visuals na 65% na-ejigide ozi ahụ nke ọma site na visuals.
Ikpo ndi na ege gi nti - Nkeji 5 bụ oge elebara anya na ndị na-ege gị ntị agaghị echeta ọkara nke ihe ị kwuru. Otu mmejọ m na-eme na mbụ na-ekwu maka nzere m… ugbu a, m na-ahapụ nke ahụ ruo MC ma hụ na slides m na-enye mmetụta na ikike ha chọrọ.
Tụọ Irè - Ana m a attentiona ntị ozugbo m kwuchara okwu maka mmadụ ole chọrọ ịgwa m okwu. Ka kaadị azụmaahịa ndị ọzọ, ọrụ m ka mma! Ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-agagharị agagharị, ana m agbakwa ha ume ka ha detara m ozi ka m denye aha na ala m (zigara MARKETING na 71813).
N'ikpeazụ, azụmahịa a na-emepụta ozugbo site na ndị na-ege ntị ma ọ bụ site na netwọk ha na-ezo aka na ya ga-egosi otu ị si eme nke ọma. Invitedkpọghachi gị ikwu okwu bụ mgbe niile agbakwunyere!
Tags: Clémence Ndị ekpentairè ngosi Atụmatụinfographickeynote ngosi ntuziakakeynote Atụmatụikike infographicAtụmatụ ngosi ihe ngosi ikeakara aka ikepptpopihe ngosi ihe omumandụmọdụ ngosiihe ngosi ihe omumaegosikwadoroNa-ekwu
Na - ebipụta Live: Akwụkwọ, Mee atụmatụ na mezuo Usoro Ọdịnaya Gị
Aug 11, 2016 na 6:01 PM
Iji ihe ngosi dị irè ga-eme ka ndị na-ege gị ntị nwee mmasị. Ma gbaa mbọ ka ị ghara iji ha gabiga ókè! Ha nwere ike ịdọpụ uche ma ọ bụrụ na ọtụtụ n’ime ha. Daalụ maka ịkekọrịta ndụmọdụ ahụ.